‘နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက် ကဗျာ’ – PoemsCorner
” morning ပါ ချစ်သူ ” မပြောဖြစ်ပါဘူး
သူများတွေလိုလည်း မိုးမမြင်လေမမြင် လမ်းအတူမလျှောက်ခဲ့ဖူးဘူး
‘အချစ်စစ်’ နဲ့ တွေ့တဲ့အခိုက်မှာ
တိမ်တွေဆီကတစ်ဆင့် တစ်ယောက်က မြင်နိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်
ငါ့အသက်ကို ငါသေတဲ့အထိကစားနိုင်ပါတယ် ချစ်သူ
မင်း သစ္စာမဲ့တာကို သိရတဲ့အချိန်မှာ
မင်း တစ်နေ့ ဝဋ်လည်လိမ့်မယ် ချစ်သူ
ရင်ထဲမှာချစ်နေမှာဘဲလို့တွေးရင်း ငါ မျက်ရည်နဲ့ဖြေတယ် ချစ်သူ
‘ ကဗျာ ‘ နဲ့စခဲ့တာမို့
အသက် ၁ နှစ်ကျော်ရှိနေတဲ့ ငါ့ကဗျာလေးတွေကိုချစ်ပေမယ့်
ငါ ကဗျာတွေ ဘယ်တော့မှထပ်မရေးတော့ဘူး.. .
ငါ့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အချစ်တွေက တန်ဖိုးမဲ့နေရတယ်. .
၁၀၀၆ နာရီတိတိ ပိပိရိရိလိမ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်
အမြဲပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာကခုန်နိုင်ပါစေလို့ ငါဆုတောင်းပေးတယ် ချစ်သူ
ချစ်သူကို သူငယ်ချင်းလို့ သဘောထားနိုင်တဲ့
သုသာန် နဲ့ သဇင်ပန်း လို့ လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိဘူး
မင်းတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါမေ့သွားတယ် ချစ်သူရယ်
‘ ဆူး ‘ မှန်းသိပေမယ့်လည်း
ဆူး သွေးပေမှာကို ပိုစိုးရိမ်တတ်ခဲ့သူပါ
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ.. .ချစ်သူ ။ ။
In: ကဗျာ Posted By: X - ray Date: Sep 27, 2013
အချစ်ဆုံးသို့ နောက်ဆုံး . .. အစီရင်ခံစာ
လမ်းခွဲ.(သို့ )ခဏတာနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ တစ်ဘ၀စာနှုတ်ဆက်ခြင်း (terry)
Leave comment7Comments & 768 views
awww,…. di poem lay ka taw taw khan sar pyi yae tar tat poem lay lar ma the bu reader sait ma kaung bar bu .di loe maine kha lae moeapyin mar ta kale shie lar loe amazing dal….
By: cynthia at Sep 27, 2013
ta ooayout kaut maine ka lay pae pyint pyint yaut kyar lay pae pyint pyint ko yae war tha nar thay ko sont lite tar taw ma kaung bu thint dal …thet thet sie par
Comment ပေးသွားတဲ့ မcynthia ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစ်မပြောသလို တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့် ကျွန်တော့ရဲ့ဝါသနာတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေက အများကြီးပါ ကဗျာရေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေထဲကမှာ ကဗျာရေးတဲ့အလုပ်ကို နာကျည်းတဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့် မလုပ်ဖြစ်တော့တာပါ ~
အစ်မ စေတနာနဲ့ ပြောပေးခဲ့တဲ့စကားတွေအတွက် ကျွန်တော် အစ်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ~~
By: X - ray at Sep 27, 2013
၀ဋ်ကျွေးရှိလို့ ဆပ်တယ်လို့သာ သဘောထားလိုက်။ ကိုယ်က ချစ်ခဲ့သလောက် ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုချစ်မယ့်လူနဲ့ တွေ့လာရင်သာ သူ့အချစ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ပြန်ချစ်ဖို့သာ စဉ်းစားပါလေ။
By: raingirl at Sep 27, 2013
ဒါပေမဲ့ ကဗျာမရေးတော့ဘူးဆိုရင် တော့သိပ်မမိုက်ဘူးဗျာ…
By: tabound at Sep 28, 2013
ကဗျာကိုမရေးဘူးလို့တော့ ခဏခဏအားတင်းဖြစ်ပေမဲ့ မနာကျည်းဖူးတော့ ဘယ်လိုအားပေးရမှန်းမသိဘူး..
နှုတ်ဆက်ပါတယ်… ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီထဲဘယ်လောက်မျောနေရဦးမလဲ မသိဘူး… Ray ။
By: 13th at Sep 28, 2013
ကဗျာလေးကို ဖတ်သွားကြတဲ့ raingirl ၊ tabound နဲ့ 13th တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ခင်ဗျားလိုပဲ မမေပျိုတို့ Loaferတို့ ကိုChiron တို့လည်း ကဗျာဆက်ရေးစေချင်ကြမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ် ဒါပေမယ့် နောက် ဘယ်တော့မှကဗျာထပ်မရေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း နောက် ဘယ်တော့မှ ကဗျာထပ်ရေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး လွယ်လွယ်နဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ရတာမဟုတ်လို့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွယ်လွယ်မပြင်နိုင်ပါဘူး
ကို13th ကဗျာရေးတယ်ဆိုတာ ဝါသနာအရရေးရေး Professionalတကျ ရေးရေး ကဗျာရေးလို့အကျိုးယုတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး ကြိုးစားပါ ကြိုးစားရေးရင် ဝါသနာကအဆင့်ကနေ Professional ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ~
By: X - ray at Sep 29, 2013